အပိုလို ၁၁ - ဝီကီပီးဒီးယား
နေးလ် အမ်းစထရောင်းရိုက်ပေးသော Buzz Aldrin ၏ လကမ္ဘာပေါ်ရှိပုံ
en:Kennedy Space Center LC-39A
ဘယ်မှညာသို့: နေးလ် အမ်းစထရောင်း, Michael Collins, Buzz Aldrin
အပိုလို ၁၁ အာကာသ စီမံကိန်းသည် လူသားများ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လကမ္ဘာသို့ သွားရောက်သည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်လည်း အပိုလို စီမံကိန်း၏ ပဉ္စမအကြိမ် လူသားများအား တင်ဆောင်သွားသည့် အာကာသ အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး လကမ္ဘာသို့ (သို့မဟုတ်) လကမ္ဘာပတ်လမ်းသို့ သွားရောက်သည့် တတိယမြောက် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
အပိုလို ၁၁ သည် ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့၊ နိုင်ငံတကာစံတော်ချိန် ၂၀:၁၈တွင် လပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်မှူး နေးလ် အမ်းစထရောင်း၊ မိုက်ကယ် ကိုလင်းနှင့် ဘတ်ဇ် အယ်ဒရင်တို့ လိုက်ပါသွားသည်။ နောက်ထပ် ၆ နာရီအကြာ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ နိုင်ငံတကာစံတော်ချိန် ၀၂:၅၆ တွင် အမ်းစထရောင်းက လပေါ်ပထမဆုံးခြေချသည်။ အမ်းစထရောင်းသည် ယာဉ်ပြင်ပတွင် နှစ်နာရီခွဲကြာအောင်နေခဲ့သည်။ အယ်လ်ဒရင်က ယာဉ်ပြင်ပနေချိန်အနည်းငယ်လျော့နည်းသည်။ တတိလူ ကောလင်းမှာမူ လကမ္ဘာပတ်လမ်းတွင် လည့်ပတ်နေသည့် အာကာသယာဉ်ပေါ်တွင် အစောင့်အဖြစ် နေခဲ့သည်။
အပိုလို ၁၁ ကို ဖလော်ရီုဒါရှိ ကနေဒီအာကာသစခန်းမှ ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့၊ နိုင်ငံတကာစံတော်ချိန် ၂၀:၁၈တွင် လွှတ်တင်ခဲ့သည်။ Saturn V ဒုံးပျံမှ third stage ခွာထုတ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက် ၃ ရက် ခရီးသွားခဲ့ကာ လကမ္ဘာပတ်လမ်းသို့ ရောက်ရှိသည်။ နေးလ် အမ်းစထရောင်းနှင့် ဘတ်ဇ် အယ်ဒရင် တို့က Lunar Module Eagle သို့ ရွေ့ပြောင်းကာ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်တွင် လကမ္ဘာ၏ ဆိတ်ငြိမ်ပင်လယ် (Sea of Tranquility) သို့ ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်မှူးများသည် Eagle ကို အသုံးပြုကာ လမျက်နှာပြင်မှာ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး Command module တွင် စောင့်ဆိုင်းနေသော ကောလင်းနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ကာ ကမ္ဘာမြေသို့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အမ်းစထရောင်း၏ လမျက်နှာပြင်တွင် လမ်းလျှောက်သည့် live TV အား တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်အား သူက လူတစ်ယောက်အတွက် ခြေလှမ်းငယ်၊ သို့သော် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ကြီးမားသောခုန်ကူးမှုဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။[မှတ်စု ၁] အပိုလို ၁၁ သည် လူသားများကို လကမ္ဘာသို့ အရောက်ပို့ပြီး အန္တရာယ်ကင်းစွာ ပြန်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်နှင့် ဆိုဗီယက်ယူနီယံတို့၏ အာကာသ စစ်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသွားသည်။
↑ Eric Jones of the Apollo Lunar Surface Journal explains that the indefinite article "a" was intended, whether or not it was said; the intention was to contrastaman (an individual's action) and mankind (asaspecies).
↑ Byrne.၊ Dave (2019-07-08)။ Apollo 11 Image Library။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ Apollo 11 Mission Summary။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Orloff 2000, p. 106.
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ Orloff 2000, p. 109.
↑ One Small Step (April 8, 2018)။
↑ Stenger၊ Richard။ "Man on the Moon: Kennedy speech ignited the dream"၊ May 25, 2001။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပိုလို_၁၁&oldid=687473" မှ ရယူရန်